Adoon, Adoonsi (; ) waa qof nool oo xoriyada ka qaadeen qof ama tiro dad ka awood badan, kuwaasi oo u isticmaalaya sida ay ayagu ku qanacsan yihiin. Adoonsi waxaa lagu sharaxaa "Marka qof loo isticmaalo in lagu shaqeeysto ayadoo wax faa'iido ah ugu jirin qofka la adoonsanayo; sidoo kale waa qof loola dhaqmayo sida wax la leeyahay oo kale, kaasi oo la iibin karo, la iibsan karo, la calaamadaysan karo, la xoogi karo, xataa la dili karo."
Sida ay ku soo warameen ururada xuquuqda aadamaha (human rights organizations) maanta waxaa dunida jira ilaa 36 milyan dad ah oo adoonsi ku nool, kuwaasi oo lagu heeysto meelo kala duwan oo dunida ah.
Markuu Yehowah dadka ku abuuray muuqaalkiisa iyo muuqaalkiisa, wuxuu aadanaha siiyey xoogaa is-qiimeyn, is-ixtiraam, iyo sharaf. Isaga oo xorriyaddiisa ka xoraynaya “addoonsiga musuqmaasuqa,” wuxuu kaloo hubin doonaa in dadku weligood ku noolaan doonaan xorriyadda iyo sharaftaas.
↑ Laura Brace The Politics of Property: Labour, Freedom and Belonging 2004 Edinburgh University Press
↑ Traditional or Chattel Slavery The Feminist Sexual Ethics Projec
↑ Kevin Bales New Slavery: A Reference Handbook
↑ Shelley K. White Jonathan M. White Kathleen Odell Korgen, Sociology in Action on Inequalities: Race, Class, Gender, and Sexuality, 27 May 2014
↑ Religion & Ethics – Modern slavery: Modern forms of slavery, January 30, 2007
↑ INAUGURAL GLOBAL SLAVERY INDEX REVEALS MORE THAN 29 MILLION PEOPLE LIVING IN SLAVERY October 2013
↑ Almost 36m people live in modern slavery - report
↑ Modern Slavery—Its End Is Near!
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Adoon&oldid=218797"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Oktoobar 2021, marka ee eheed 09:40.